Isboonsar - Isku-dheelitirka Kiimikada Isku-dheelitirka: Adeegga tusmeynta Google
Isboonsar - adeegga tusmeynta Google
Kafaalaqaad: adeegga tusmeynta Google
Website: Qalabka tusmeynta Google
Yaan nahay iyo maxaan u soo saarnay AddNewURL?
Waxaan nahay shirkad suuq geynaysa SEO iyo internetka oo fadhigeedu yahay Finland. Sababtoo ah mid gaar ah oo ka mid ah waxqabadkayaga waxaan u baahannahay inaan ka soo qaadno 500 illaa 1000 URL bil kasta.
Ka waran adeegyada tilmaamayaasha kale (onehourindexing.co, linklicious.co, elitelinkindexer.com, instantlinkindexer.com, iwm)?
Waxaan ogaanay in adeegyadan aysan u shaqeyn sidii loo xayaysiiyay. Waxaan ogaanay tan markii aan u isticmaalnay mashaariic kale. Sababtoo ah waayo-aragnimada niyadjabka ah, waxaan u dhaqaaqnay inaan dhisno wax ka sii wanaagsan. Waa wax aan macquul aheyn in lagu muujiyo kumanaan URL oo ah qiimaha $ 20.